Inkqubo ye-Endocrine, umsebenzi we-ovarian
Uhlobo lwe-hormone (i-estrogens luqala ukukhula, kunye neprogesterone iyahlahla), ukuhamba kunye neentsuku ezibucayi, kufuna ukuphuphuma kwishedyuli exakekileyo. Ngaphandle kwesizathu eJapan nakumazwe amaninzi aseYurophu asebenza amantombazana amancinci anikwe iholide ezihlawulelwayo ezi-3 ngenyanga. Umzimba wesibhambane ngexesha leenyanga ulahlekelwa ubuncinane igrlasi ye-cereal (250 ml), kwaye kunye kunye neyesagas kunye neyesinyithi, ezinceda iiseli ezibomvu zegazi zithwala i-oksijeni kwiimfucu kwaye, kwindawo yokuqala, kwingqondo.
Yingakho ngoku kunzima kakhulu ukugxila emsebenzini kwaye ulungelelanise imeko eguqukayo. Ukongezelela, uyakhohlwa, uqonde ulwazi olutsha ngakumbi, kwaye kubaluleke kakhulu - kungekhona ukuvuka ekuseni. Konke oku kubonakaliswa kwe-hypoxia - i-oxygen yindlala yengqondo ebangelwa ziziganeko ze-hormone kunye nokulahlekelwa kwegazi. Beka iyure ngaphambilana kwaye uvuke iyure emva kwexesha eliqhelekileyo: kwiintsuku ezibucayi, imfuneko yokuphumla ikhula ngokuphawulekayo. Inkqubo ye-endocrine, imisebenzi yama-ovari - oku kwinqaku lethu.
■ Yidla ukutya okuninzi kunye ne-vitamin C, ekunceda ekuphuculeni le nto. Faka iilwanyana, izikhupha zeqanda, amakhowa, i-buckwheat, i-oatmeal, iiplum, iipinashi, i-sorrel, iklabishi, i-beet, i-karoti, i-radish, iinqabileyo, iikhiwane, i-apricots ezomileyo, i-acunes, i-oranges, i-tangerines, i-cocoa, i-nut. Gxotha konke oku ngeentshisi ezimuncu (i-citrus engcono, igromegranate kunye ne-apula) - kwindawo engummangaliso, isinyithi singcono.
■ Qaphela - ingozi yokulimala iphakamileyo kunanini ngaphambili. Khumbula imigaqo eyaziwayo ebuntwaneni: akukho mkhwa, akukho nyundo, akukho mdlalo ayikho into yokudlala.
Ku-5-8 kwabasetyhini aba-10, ukuya esikhathini kuyababuhlungu. Kwabanye, baya kuba vavanyo loqobo. NgokweziHlomelo zeZizwe ngezizwe, le meko ibizwa ngokuthi i-dysmenorrhea. Kwaye oku kukuxilongwa, isizathu sokuba kufuneka sisungulwe nakanjani! Ubunzima buvame ukuvalelwa kwisisu esezantsi kwaye bubuhlungu, buhlungu okanye buqhekeza. Imvakalelo engathandekiyo, njengomthetho, iyenzeka ngosuku lokuqala lokuya esikhathini nokugqibela kungapheli iiyure ezingama-48. Ukongezelela, iintsuku ezimbini ngaphambi kokuqala kwenyanga, kunokubakho intlungu kwinqanaba eliphantsi
Ukunyanzeliswa kwengqondo - ukukhubeka, i-anorexia (ukungabi nxilweni), i-bulimia (ukugqithisa), ukuxinezeleka, ukulala, ukulala, ukunyamezela, ukunyamezela, ukungahambi kakuhle.
I-Vegetative - i-nausea, i-ercuation, i-hiccups, i-chills, i-fever, i-sweating, i-fever, umlomo owomileyo, ukuvuthwa rhoqo, ukunqumla.
I-Vegetative-vascular - utyhefu, ukutyhafaza, intloko, ukukhawuleza okanye ukuphuza intliziyo, i-extrasystole (ukuvakalelwa kwintliziyo), intlungu entliziyweni, "i-goose ikhuphuka" elukhumbeni, ukunyuka kwezandla kunye neenyawo, ukukhukhuma, ukuvuvukala ubuso, "iibhegi" phantsi amehlo.
Ukutshintshana-i-endocrine - isicasuliso, ukuhlanza, ukuvalelwa kweenyawo ze-cotton, ubunzima obuthakathaka, i-pruritus, intlungu edibeneyo, ukuvuvukala, i-polyuria (i-urine form formation).
I-Dysmenorrhea ibalulekileyo (i-spasmodic) kunye neyesibini (i-organic), engabangela i-cyst ovarian, i-uterine i-myoma okanye ezinye izifo. Kufuneka ukuba isuswe! Ukuba kuvela ukuba sithetha malunga nenketho yokuqala (leyo yinto eyenzeka ngayo kwiimeko ezininzi), unokuphefumula ukusila. Oogqirha bachaza ukungahambi kakuhle ngexesha lokungalingani kwe-hormone. Nguye okhokelela ekukhululweni okwandisiweyo kwigazi lezinto ezikhethekileyo-i-prostaglandines, ebangela ukutyunjelwa okubuhlungu kwinqanaba le-muscular of the uterus. Gcinani engqondweni: le ntlungu iyasuswa kalula kunye nezidakamizwa ezingekho-steroidal ezichasayo. Musa ukuzibamba! Emva koko, ngamanye amaxesha kunzima kangangokuba kubangela ukuba oogqirha bangabandakanyi i-appendicitis, i-cholecystitis, i-pyelonephritis kunye ne-coal ye-renal, efana nokuziguqula phantsi kwexesha elibuhlungu. Ukongezelela, i-prostaglandin engaphezulu ichaphazela kakubi ezinye izitho, ezibonakaliswe yi-migraine, i-nausea, i-tachycardia, i-dizziness kunye nezinye iimpawu ezihamba ne-dysmenorrhea. Thatha ipilisi ekhuthazwa ngugqirha, ngaphandle kokulinda intlungu ukuba ufumane amandla. Kodwa gcinani engqondweni: nangona i-aspirin kunye neparacetamol zizisa isihluthulelo, kodwa ziyanciphisa i-coagulability yegazi, zenze iinyanga zibe zininzi kwaye zide. Uncedo kakhulu kwiimeko ezinjalo, iiVithamini A, C, B kunye no-E, kunye nezinto ezilandeleleneyo, ngokukodwa i-calcium, i-magnesium ne-boron. Ukuzalisa ukusilela kwabo kuya kunceda ngokukhawuleza i-juices, i-cocky-carrot cocktail (i-150 g isandula i-kroti enomhlaza kunye ne-50 grams yekhilimu), ubisi kunye nobusi, i-green okanye ingqungqayi yeeyi. Umzimba ukhula i-estrogen - i-hormone yobuhle besifazane kunye nempilo: ijolise ekuhambiseni i-ovulation, kwaye kuwe, isihluthulelo samandla, kwaye isimo sengqondo sisona sikhulu. Kufika ixesha elifanelekileyo, xa ukhuseleko lusempilweni, inhlalakahle iphezulu, ukusebenza komsebenzi kuyamangalisa, kwaye ukuxhatshazwa kwengcinezelo kunkulu kunanini ngaphambili.
Ngendlela, iintsuku ezingama-5 zokunyanzeliswa komzimba umzimba onqwenela ukuba bafanise, kwaye ngoku, banomdla wokufumana isabelo sawo sovuyo. Musa nje ukunyanzelisa umthwalo ukuba awufuni ukuhlaziya okanye ukuphelelwa amandla kwi-gym. Inyaniso kukuba iintlungu ezininzi ze-vascular zenzeka ekuqaleni komjikelezo, kuba utshintsho lwama-hormone kunye nokulahlekelwa kwegazi lonakalisa i-myocardium. Kuthatha iintsuku ezingama-5-7 ukufumana kwakhona! Ekupheleni kweli xesha, umngcipheko weempendulo zokugula kunye nokunyuka kwezifo zesikhumba kwanda. Ukuzikhusela, kufuneka uhlambulule umzimba. Zama ukuhlala ngomhla we-10 okanye we-11 kwi-kefir, ii-apula, i-watermelon okanye i-oatmeal ngaphandle kwe-oyile ngaphandle kweoli. Uza kukhululeka kwiibhox, ngexesha elifanayo ulahla i-pounds yobunzima obunzima. Cwangcisa utyando olucwangcisiweyo okanye uvakashele kwinyango yamazinyo ngosuku lwe-7th-9 lomjikelezo: ubukhulu bentlungu bubuhlungu ngoku, kwaye umngcipheko woxinzelelo lwe-postoperative lungaphantsi kunezinye iintsuku zomjikelezo.
Iqondo le-hormone ye-luteinizing eyenziwa yi-pituitary gland kunye ne-estrogen eveliswe ngama-ovari iye yafikelela kumlinganiselo. Oku kuthetha ukuba une-ovulation! Iqanda lishiya i-flaal (ipollicle), apho iyavuthwa, okubangelwa ngumzimba kukho isivunguvungu se-hormonal. Musa ukumangaliswa ngokuphazamiseka kwemizwa, ukukhungatheka kunye nokukhathala, ukudonsa ukuvakalelwa kwisisu esezantsi kunye nokutyhulwa kwegazi, okuqhelekileyo kuthathe iintsuku ezingama-2-3. Inyani kukuba ngethuba le-ovulation (ukukhululwa kweqanda elivuthiweyo ukusuka kwi-ovary), inxalenye yesikhumba somlenze we-uterus inqatshelwe, njengokuba ngexesha lokuya esikhathini. Kwimimiselo yegazi kuncinci kangangokuthi ingafunyanwa kuphela phantsi kwe-microscope kwi-smear ye-vaginal. Ngaba kwenzeka into engalunganga? Yitsho i-gynecologist malunga nale!
Ukunciphisa i-oracatory bleeding, ngemini ngaphambi kokuba i-ovulation kwaye ngexesha layo, uphuze i-infusions ye-nettles, udle ama-berries ama-viburnum kunye nobusi, uthathe amalungiselelo e-calcium kunye nezinye iindlela ezandisa ukwanda kwegazi, kodwa nje ngokuyalelwe ngugqirha. Ngokwezibalo, izifo ezithathelwana ngesondo, abafazi bahlala besulelwe ngethuba ngexesha lokuvuthwa, kuba ngeli xesha, ngaphantsi kwefuthe le-endocrine, balahlekelwa lula kunye nentloko kwaye bahamba ngokuthintana. Okuyingozi kakhulu kule nkalo iinyanga zasehlotyeni kunye nexesha levelvet ekuqaleni kwekwindla - ukubizwa kwamahomoni kunzima ukuchasa. Musa ukucwangcisa nayiphi na ibalulekileyo ibhizinisi kule xesha, zizinyame! Ukuba ulambile, uphazamisekile kwaye ubusuku obuphakathi, ungabamba ubanda okanye uphukise umonakalo wesifo esingapheliyo.
IHormones estrogen ilawula malunga neenkqubo ezingama-300 emzimbeni. Akumangalisi ukuba ukwehla kwinqanaba labo ekupheleni komjikelo kukhokelela ekuphuhlisweni kwe-150 (!) Iimpawu ze-premenstrual syndrome (PMS). Emzimbeni wesibhakabhaka, i-metabolism iyancipha, i-fluid isela kwiimfucu, isondlo sikhula, ukuphakama kwesisindo, ukuphazamiseka kuqala ukukhula ngamandla ngaphakathi emathunjini, ngoko isisu sisakhula. Kubonakala ukuba ufumene ubuncinane ubunzima be-5 kg ​​ngeveki, nangona kunjalo - kungekhona ngaphezu kwe-1-1.5 kg (kunye nalawo - kuphela ngenxa yokugcinwa kwamanzi emzimbeni). Nokuba ingcamango yokuba konke akukude, akududuzi: emva koko, umntu ufuna ukubonakala kakuhle kungekudala, kodwa rhoqo! Kweminye kwimingcele yexesha lokuya esikhathini, kukho kwakhona ukuxhamla kwe-migraine eqinile, kwaye ebusuku kuqukumbela ngokukhawuleza kwimizimba yamathole. Ngokuqhelekileyo isibonakaliso sesilumkiso malunga nendlela yokubaluleka kweentsuku eziyimpumlo kunye nebhola elibi, ebonisa ukungabikho komzimba wokhuseleko, abayidlayo. Yidla rhoqo, kodwa kwiindawo ezincinci. Ukukhetha ukutya okwikhalori ephantsi. Ungaphuzi ubuncinane iyure ngaphambi kokuba ulale, ukuze ungaqhubeki ukuvuvukala.
■ Ukunciphisa ityuwa (igcina amanzi kumathishu). Kwezinye izikhokelo zabasetyhini, kubhaliwe ukuba i-saline iququzelela ukubonakaliswa kwesifo se-premenstrual syndrome. Musa ukukholwa - ityuwa ibomeleza amaxesha amaninzi! Kwiintsuku ezibucayi, gweba amanqatha amanzi, i-crisps, i-sausage kunye ne-cheeses e-spicy, kwaye ukhethe iimveliso kunye nomxholo onetyuwa ophantsi.
■ ncike kwiipulo kunye ne-kefir - zivuselela umsebenzi wezintso. Iimveliso zamehlo e-diuretic: amaqabunga e-bearberry, itiye yezintso, iqabunga le-cranberry.
■ Ukusuka kwimigraine yangaphambili, iinyanga ezixhatshazwayo zabesetyhini, ziyakunqumla ukuqokelela imfuyo, eneempembelelo ezinomdla kunye nokuphumla. Hlanganisa ngokulinganayo kweminiti, isitifiketi saseSt. Phala umxube we-tablespoon 1 ngeglasi yamanzi abilayo imizuzu engama-30 kwi-thermo, ubunzima. Ukunyuswa kwamkela kuthatha 1/3 indebe kathathu ngosuku malunga nemizuzu engama-40 ngaphambi kokutya. Ukuchasana ngaye kukunyamekela ukuphendulwa kwemizimba kunye nokunyanzeliswa komntu kumacandelo okuqokelela imfuyo.
■ I-Aromatherapy inokunciphisa i-PMS syndromes. Ukuthenga isibane se-aroma okanye uhlambe kunye neoli efunekayo ye-sage, i roses, i-geranium, i-lavender kunye ne-romom chamomile.
Ukubamba i-clitoris: izizathu kunye nokunyangwa kwesifo esingathandekiyo
Imveliso yokunakekelwa ngomlomo
Ezinye Izizathu Zokuxhatshazeka Kwangapheliyo
Indlela yokuziphatha, ukuze kungabikho ukujikeleza komgudu
Izifo zentetho: i-gonorrhea, i-syphilis
Izindlela ezifanelekileyo zokulwa nokudandatheka
Intombi kaMaxim Galkin uLisa - umculi ka-Elena Malysheva, ividiyo
Ikhadi lomthi weKrisimesi kunye nesitayela seNew Year 2016
Izakhiwo ezisetyenziswayo zobisi kwisondlo sezingane
Umama - unxantathu, unyana-u-introvert: indlela yokufumana indlela?
U-Evelina Bledans wenza ingxelo malunga nomtshato wakhe, ividiyo
Iingubo ezi-9 ezenziwe ngefashoni ekwindla-ebusika 2015-2016
Iingcamango zobungqina boMnyaka omtsha we-2017 I-Rooster ngenxa yamehlo omdaka, obomvu neluhlaza, imiyalelo yesinyathelo ngesinyathelo kunye nevidiyo
Izitya ezilula ezivela kwiitatayi: zokupheka
U-Alena Vodonaeva utshata kwakhona?
Umntwana ugxeka esikolweni: wenzeni?
Amanzi okuhlambela ngeenyawo ekhaya
Ukukhetha iBhayisikili yezingane
Amathoyizi omnyaka omtsha-2017 ngomnyaka we-Rooster ngezandla zabo kwizinto eziphathekayo, iphepha kunye neendwangu zamaphetheni. Indlela yokwenza iibhola ezithakazelisayo kunye neengqekembe zomthi weKrismesi ukwenzela ukuba inkulisa kunye nesikolo: iiklasi zeeklasi kunye neefoto kunye namavidiyo
"Izilwanyana ezihlaza" - indlela entsha yokutya okunempilo
Ukuhlaziya iziqholo: inyaniso okanye inyaniso?